PressReader - Isolezwe: 2018-02-14 - Itwetwe kubulawa unina nendodakazi
Itwetwe kubulawa unina nendodakazi
Isolezwe - 2018-02-14 - IZINDABA - NONTUTHUKO NGUBANE
UTHUKA izanya umndeni waseMlaza kulandela ukubulawa kowesifazane nendodakazi yakhe okuthiwa bahlaselwe ngamadoda angaziwa, ngoMsombuluko.
UNksz Lindiwe Dlamini (48) nendodakazi yakhe uNksz Londiwe Dlamini (25) badutshulwe besekhaya esigcemeni kwa J, ngasemgwaqweni Isipokini.
Ngokuthola kweSolezwe kufike amadoda amabili ngo 3.30 ntambama, angqongqoza kwaDlamini.
Kuvule uNksz Dlamini, omunye umsolwa kuthiwa ubonakale exoxa naye, wamnikeza incwadi wabe esemdubula.
Indodakazi kamufi kuthiwa ibisethoyilethi elingaphandle kwendlu ngesikhathi unina edutshulwa.
Kuthiwa iphumile izama ukubaleka okuyilapho umsolwa eyidubule khona ngemuva. Indodakazi kaLondiwe eneminyaka eyisikhombisa ebithunywe esitolo kuthiwa ifice izidumbu egcekeni.
Okhulumela umndeni, uNksz Lungile Dlamini uthe bathuka izanya njengoba bengazi ukuthi abahlaseli bazobuya yini bezobahlasela. “Siyesaba njengoba sihlezi la endlini ngoba abahlaseli bashiye incwadi esingakwazanga ukuyifunda ngenxa yokuthi ithelwe yigazi, ethathwe amaphoyisa. Asazi kungani umama nodadewethu omncane bebulewe ngoba bebengenazo izitha. Sifisa nokucasha ngoba sinovalo,” kusho uLungile.
Indodana kamufi uMnqobi “Nqo” Dlamini (19) nayo ethe inovalo lokuthi ingahlaselwa itshele Isolezwe ukuthi bekunezinkulumo zokusonga ebizitshelwa ngabantu kulandela ukubulawa kukamfowabo uMnuz Lungelo Dlamini nyakenye ngoMeyi.
“Ngezwa abantu bengitshela ukuthi osolwa ngokubulala umfowethu uthi ngeke akhululeke uma engakangibulali ngoba akazi ukuthi ngicabangani. Uma sekuhlaselwa umndeni wami kanjena kungenza ngisabe,” kusho uNqo.
Isolezwe lithole ngomthombo osondelene nodaba ukuthi le ncwadi eshiywe kumufi ibinezinkomba zokuphindisela ngoba bekunezinhlamvu ebezibonakala kancane eziveza ukuthi bayoze bawuqede lo mndeni ngenxa yothize “owashona” ngesandla selinye ilungu lomndeni wakwaDlamini.
ULungile uthe yize ebengahlali ekhaya ngenxa yomsebenzi kodwa bebezwana nonina nodadewabo.
“Ngigcine ukukhuluma nodadewethu ngoMgqibelo ngoba bekuwusuku lwakhe lokuzalwa. Kunzima ukwamukela ukubulawa kwabantu besifazane ngesihluku esingaka. Udadewethu unengane enamasonto amathathu ayisishiyile kumanje. Ingane yakhe eneminyaka eyisikhombisa ebone yonke into ungathi iyagula namanje ngenxa yalesi simo,” kusho uLungile.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala uthe kuvulwe amacala amabili okubulala, akekho oboshiwe. Uphenyo luyaqhubeka.
UNKSZ Londiwe Dlamini obulewe